Ọrụ nchekwa na Dubai G4S, World Security Apply taa
Ọrụ nchekwa na Dubai
Ọrụ nchekwa na Dubai na United Arab Emirates. Otu n'ime isiokwu kachasị ewu ewu maka ndị na-achọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ. Na ọrụ nchekwa na Dubai nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka gị. N’aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ anyị na-ele anya inyere gị aka. Anyị na enyere ndị na-achọ ọrụ n'aka gburugburu ụwa. Karịsịa site na South Africa na India na-achọ ọrụ na Dubai na ndị ọhụrụ na-agbachitere Pakistani.
Ụlọ ọrụ Dubai City mgbe niile inye aka na nyocha ọrụ. Anyị otu na-eduzi ndị na-achọ ọrụ mgbe niile ịchọta ọrụ nchekwa na UAE. Anyị nwere olile anya, na ndị otu ọkachamara anyị nwere ike inyere gị aka n'oge ị na-achọ ọrụ. Na obodo Dubai, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ọrụ. Jobschọta ọrụ na ụlọ ọrụ dịka G4S, Hawk Security, cyber Security na ndị ọzọ ụlọ ọrụ nche Dubai.
N'iburu nke a n'uche, ị ghaghị ịnwale anyị nduzi zuru oke na otu esi achọta ọrụ nche na Dubai. Ụlọ ọrụ anyị bụ isi iyi nke ụlọ ọrụ ndị ị ga-ebuteghachi. N'oge na Dubai na Abu Dhabi, enwere ọgaranya ndị ọgaranya n'ihi na security ọrụ in Dubai ?.
N'ezie na UAE bụ a ahịa na-arịwanye elu maka ngwaahịa ndị dị oké ọnụ ahịa. Ma na nke a naanị abịa VIP VIP. Ọzọkwa, ahịa na-eto eto bụ maka azụmaahịa ọhụrụ. Ọzọkwa maka ụdị mmadụ VIP, na ndị ọchụnta ego dị elu. Ndị ahụ niile chọrọ ndị ọrụ nchekwa.
E nwere ọtụtụ ụzọ ịchọta ọrụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị duzie gị maka United Arab Emirates. Ndị ọhụụ ọhụrụ ga-atụ anya ọtụtụ uru. Otu n'ime ihe atụ bụ ọrụ na-arụ ọrụ Dubai Airport nche. Mgbe ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga-ewe ụlọ ọrụ Dubai. Ha ga-enye ya a ezigbo nkwekọrịta ogologo oge.
Kedu ka m ga - abụ onye nche?
Iji ghọọ onye na-eche nche na Dubai. Mkpa inwe ụfọdụ iru ntozu na ahụmihe. Ndị nche bụ achọrọ ịrụ ọrụ na Emirates. Ọ bụrụgodị na ha bụ mpaghara ndị ọrụ ma ọ bụ ndị mba ọzọ. Ha niile ga-aga ma mee njem ogologo izu iji gbasara 36 awa nke ọzụzụ na ọzụzụ bara uru. The Dubai Police Academy na-ejikwa 3 nzọụkwụ nke akwụkwọ. A na-anwale onye nwe obodo na ule atọ.
Ikwu okwu mgbe ịchọrọ ịza ajụjụ. Mgbe ahụ ị ga-ede nnwale na nyocha ihe ọmụma bara uru. Lelee anya na ndụmọdụ na esi aga ule Ebe a. Ma ọ bụrụ na nwa akwukwo nke oma gafere niile nyocha 3. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịzụ ahụrụ na United Kingdom na obodo Guilds ga-enye gị akwụkwọ nke inye akwụkwọ nzere ikike ịghọ onye nche.
Ihe omume 3 na-agụnye klas na nchọpụta ndị omempụ. Otu esi eji ngwaọrụ nche. Otu esi ejikwa igwe ọkụ na otu esi achọ ụgbọ ala na ebe obibi. N'ebe dị mma maka nchekwa ọrụ na Dubai. Ọ bụ ezie na ị ga-amụta ihe karịrị 50 pasent nke ihe ọmụmụ a bara uru. Yabụ na ọ bụghị naanị na ị ga-ama onye ga-abụ onye nche. Mana ị ga-amụta otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi.
Kedu ihe m ga-amụta mgbe ị na-elekọta ọrụ nchekwa?
Otu n'ime ihe kachasị mkpa ndị na-aga ime na-amụtakwa. Ikwu okwu n'ozuzu bu otu esi aga arụ ọrụ agha ndị ahịa. N'ihi na na njedebe nke ụzọ bụghị naanị njikwa kwesịrị ịma na otu esi echebe nkwa ahụ. I kwesịrị ịmụ otu esi ejikwa onwe gi na ndi ozo n'oge ihe mberede. Ihe ndị aga-eme na-amụta nke mbụ bụ otu esi echekwa ebe ihe egwu dị. N'akụkụ dị mma, nke ahụ ga-abụ ihe mmụta site na ngalaba ndị uwe ojii. Dị ka ozi dị ka otu esi achọ ntọala ma ọ bụ ụgbọ. Isi onye na-akuzi ihe bu International Center nke Nchebe na nchekwa na ụlọ akwụkwọ ndị uwe ojii Dubai.
Ndị isi uweojii na-enye usoro ọmụmụ na klas niile. Ya mere ị ghaghị ime ihe kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, ị ghaghị ịma otú e si emeso ya na ụlọ ọrụ Gulf. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ dịka ọmụmaatụ, inweta ndị nkuzi sitere n’aka gọọmentị ndị ọzọ na ebe metụtara azụmahịa dị ka Civil Defense. N'akụkụ dị mma, ha niile ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Maka ọrụ nchekwa na Dubai, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ehiwe usoro ọzụzụ ha. N'akụkụ na-adịghị mma, a ga-enyocha ule n'ụlọ akwụkwọ.
Emere ka usoro ọzụzụ a dum na Dubai na Abu Dhabi na 2005. Ma isi azụmahịa amalitela igba na 2008. Ruo ugbu a, agụmakwụkwọ ahụ enyela ọzụzụ maka ndị ọrụ nchekwa 57,000. Emere mmemme a n'ụzọ nke ọtụtụ mmadụ ga-agafe ya. Yabụ dokwesighi ichegbu onwe gị banyere nke ahụ. Ihe a na-agafe karịrị 80%.
Kedu ụgwọ nke onye nche na Dubai?
Nke ahụ dabere n'ezie,ụfọdụ ọrụ bụ AED1,000 otu ọnwa rue 8,000. Ma werekwa uche, ikwesiri ile anya ọrụ nche nchedo. Na United Arab Emirates, ihe niile dabere na ndị ọrụ na gị. Kedu ụlọ ị na-achị ugbu a ?. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịjụ ndị ọzọ si Dubai na Abu Dhabi. Otu n'ime ụzọ kachasị mma ịchọta bụ jụọ ndị ọzọ banyere ụgwọ ọrụ. N'ihi na ị maghị ya ruo mgbe ị ga-achọpụta n'ezie.
Chọta ọrụ nchekwa na Dubai na-ewe oge. Ọkọlọtọ ịchọ ọrụ na-ewe oge. N’agbanyeghi ike ị ga-anwale. N'ọtụtụ oge, ọ ga - ewe 6months. Oge ị ga - anọ na United Arab Emirates. Ọ na-enyere gị aka mgbe niile, karịsịa maka ndị ọpụpụ na mba ọzọ.
Dịka onye nche, ị nwere ike ịtụ anya ụgwọ ọnwa. N'aka nke ozo na ezigbo ahumahu gi, ị nwere ike ijikwa ezigbo ụgwọ ọrụ. Dịka onye nche VIP nkeonwe, ị nwere ike ijikwa karịa 550 ruo 1,500 AED otu ụbọchị. N'akụkụ dị mma, ịchọghị ya ijikwa ikike MBA.
Olee otu esi achọta nchebe nchebe na Dubai?
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a maka Dubai. Dị ka eziokwu, anyị ụlọ ọrụ nwere ọrụ dị na Dubai na Abu Dhabi. Karịsịa maka ndị nlekọta ọnụ ụzọ na ndị na-enyere VIP nchekwa. Ikwu okwu na Abu Dhabi na Dubai ị nwere ike chọta ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-enye ohere ziri ezi ndị ziri ezi. The N'afọ ndị na-egosi nnukwu oke maka ahịa nchekwa na Middle East.
N'akụkụ dị mma, ọtụtụ ohere ndi mmadu n’abia amalite ngosi. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, Emirates nwere ọganihu na ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa maka ọrụ Expo 2020. Daysbọchị ndị a, mpaghara GCC na - emesịa ịmalite ijikwa ọrụ dị mma maka ndị na - agafe agafe. Karịsịa na ụlọ ọrụ dị na Abu Dhabi na Dubai. Ọzọkwa, ihe ngosi 2020 na-agagharị ma ụlọ ọrụ ọhụrụ malitere mmemme pụrụ iche maka ndị ala ọzọ. N'aka nke ọzọ, ị ga-elekwa ụlọ ọrụ ịgba ụgwọ anya. Web Careerjet na Dubai na Ebe nrụọrụ weebụ Monster Gulf. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Ọrụ bouncer na Dubai
Ọrụ nchekwa na Dubai dị ka Bouncer bụ ihe kachasị ewu ewu. Obodo Dubai ụlọ ọrụ na-enye ndepụta zuru oke nke ọrụ nchekwa na Dubai. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ndị otu anyị na-achịkwa nkọwa zuru ezu banyere otu esi achọta ọrụ dị ka onye nchekwa na Dubai. Lelee onwe gị etu ị ga-esi chọta ọrụ na ngalaba nchekwa. N'ihi na Nche nchebe na Dubai, ọrụ na ụgwọ dị ezigbo mma na United Arab Emirates.
A na-akwụ ụgwọ ọrụ nke ọma na UAE na ọtụtụ ihe. Ma ị ga-achọ inwe ezigbo ahụmahụ. Ọzọkwa na-achọ mma na ụgbọ oloko na mgbatị ahụ. Maka ụfọdụ n'ime ụlọ oriri abalị na United Arab Emirates na-achọ enyemaka. Karịsịa site na ụlọ ọrụ nchekwa mpụga. Otu ihe buru ibu na oru a bu ichebe ihe ulo oru. Inyere ndị ọrụ obodo aka site na ijigide gburugburu ebe obibi dị nchebe nwa oge.
Dịka bouncer, will gaghị abụ ịbụrụ onye ọrụ ebere. Ọ bụrụhaala na ị ga-eme ihe n’ụzọ iwu na-akwadoghị ịchebe. Ikwesiri igba mbọ, ị ga-edobe iwu idobe ndụ na akụ gị nwetara na oge niile. Na bouncer na-eme ihe ziri ezi nke ndị ahịa na-atụghị anya ya. Akụkọ ọhụrụ kwesịrị ka e nye ya n'ụzọ zuru ezu banyere ihe ọ bụla enyo enyo na ihe omume na klọb. Ọzọkwa, mpaghara nchebe na-enweghị usoro ma ọ bụ na-ewu ụlọ na ebe obibi mgbe niile.
Tupu ụlọ ọrụ ahụ, a ga-emechi ya. Ihe ka ọtụtụ n'ime bounced ọrụ na Dubai gụnyere ileba anya na ijikwa oghere nbanye ụlọ na ọnụ ụzọ ụgbọ. N’abalị, ọrụ ya nwere ike ịbụ nke a na-echebeghị. Mana ndị nche ọzọ ga-eche nche sistemụ mkpu mkpu na CCTV. Imirikiti igwefoto na sistemụ arụmọrụ ga-elele gị 24h ụbọchị ịchọpụta ọnọdụ mberede.
G4S kasị mma maka ọrụ nchekwa na UAE
G4S bụ ụlọ ọrụ kachasị na ụwa na nchekwa nchekwa. Otu n'ime ihe ngwọta kachasị mma maka ndị si mba ọzọ. Ọzọkwa, ha bụ otu n'ime ndị na - arụrụ ọrụ n'ụwa niile. G4S bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma na Middle East maka ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ na-arụkarị ọrụ G4S na ogo Forbes.
Ụlọ ọrụ G4S na-enye ọtụtụ uru. Site akwụ ụgwọ ego na ego ịkwụ ụgwọ nye ndị ọrụ ha. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche na-akpali akpali, oge na-akwụ ụgwọ ma na-adịte aka. Ụlọ ọrụ G4S bụ maka gị. Otu n'ime ebe kachasị mma maka ọrụ ogologo oge na UAE. Nke a bụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ime ihe dị iche na nchekwa ọrụ Dubai.
N'ime ọrụ nchekwa na ahịa Dubai. G4S bụ ebe dị mma nye gị karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ndị ọrụ mba ọzọ. Na G4S naanị ị gaghị achọta ụdị dịgasị iche iche na ohere ọrụ n'ebe ọ bụla na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Òtù Nche Mbụ
ọzọ ụlọ ọrụ nwere mmasị bụ Nke mbụ Security Group. Companylọ ọrụ a siri ike mara na ọganihu Middle East. Ngalaba nchebe mbụ na - adabere n'ịgba ndị mmadụ. Ụlọ ọrụ ahụ bụ ikwere na ịmepụta usoro ihe niile. Ụfọdụ ndị na-ekpo ọkụ na-arụkọ ọrụ ụlọ ọrụ a ma gbanwee nchebe siri ike na Dubai. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nchebe na Dubai. Òtù nche mbụ nke na-elekọta ndị mmadụ pụrụ iche. Na-aghọ otu n'ime ha ọbụna dị ka onye ọhụụ ọhụrụ ọ bara uru n'ezie.
Òtù nche mbụ nwere ọrụ kachasị mkpa. Nyere Middle East N'ihi ụlọ ọrụ ahụ bụ inye ọrụ gburugburu ebe obibi. Gị na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike jikwaa ochicho onye o bula. Imirikiti ndị ọrụ na-eme ka usoro izi ihe ha dịkwuo mma ma na-akwado uto onwe onye. Nchebe mbu arụ ọrụ dị ukwuu na Dubai. Ọzọkwa, a na-akwado mmemme mmepe na ọtụtụ ahịa na UAE.
Ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma iji hụ na ndị njem nleta UAE na-echekwa. Ndị otu nchekwa mbụ ghọrọ ụlọ ọrụ mba ụwa n'etiti ọzụzụ na ụlọ ọrụ ọhụụ. N'otu oge ahụ, ha niile nwere ike inweta ndị ọhụrụ ime ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ọhụrụ. Ndị mmadụ na-ejikwa ọtụtụ contracts gafee nzukọ. Maka nzube nke ijikwa ala contracts na UAE, ụlọ ọrụ ahụ na-eme ndị ọrụ ha ụzọ ọhụrụ maka mmepe nke ọrụ ha. Ruo njedebe, ụlọ ọrụ ahụ dị oke nganga nke omenala ụlọ ọrụ anyị.
Biko zitere anyị ọrụ gọọmentị HR na-ekpuchi otu CV gị info@firstsg.com.
Ụlọ ọrụ Ụlọ Nche Hawk
Na Hawk Security Services, ụlọ ọrụ ọzọ na-ahụ maka ọrụ na UAE. Ọnọdụ ndị ahụ, enwere ohere inweta ohere maka ndi oru ozo. Ebe ụlọ ọrụ a dị na United Arab Emirates. Ezi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka onye ọpụpụ. N'ihi na ụlọ ọrụ ahụ nwere usoro pụrụ iche na nke dị iche iche. Karịsịa maka onye ọrụ ọhụụ na Dubai, Sharjah na Abu Dhabi.
Ụlọ ọrụ nche mkpuchi nwere saịtị dị iche ebe n'ime UAE. Ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ya niile United Arab Emirates na-achọ ọrụ na Dubai. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ị nwere mmasị iji ọrụ site na otu n'ime ndị ọrụ kachasị elu na ụlọ ọrụ nche. Ụlọ ọrụ nchebe Hawk ga-enwe ike inyere gị aka ịzụlite onwe gị dịka ọkachamara nche.
E nwere ọtụtụ uru ị ga-enweta sitere na ụlọ ọrụ nchekwa Hawk. Kemgbe ị sonyere ọzụzụ ahụ na malite ịmalite ọrụ gị na nke a. N'ezie, ị ga-ahụ onwe gị na atụmatụ dị mma. Ị ga-abịa ma soro Hawk Security Services na United Arab Emirates. Ya mere ụlọ ọrụ a bụ dị mma maka ịkwaga Dubai.
Zigagharịa mmalite gị email: hr@hawksecurityservice.com
Ụlọ Nche Nchebe na-enye ọtụtụ nsogbu nchedo. Enwere ike itinye gị maka nchekwa gị ọrụ Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. N'ikwu okwu n'ozuzu, Ụlọ Nche Nchebe bụ nke ndi uwe ojii Dubai na akwadoro. Ulo oru a bu n’obi ịghọ onye kachasị na United Arab Emirates. Na Nche Nchebe ị nwere ike ịnwe ọrụ dịka onye ọrụ ma ọ bụ onye nlekọta.
N'ebe ndị na-adịghị mma, ka ị na-aga nzukọ a na ụlọ ọrụ a. I tosiri izute ihe kachasị mkpa a chọrọ iji ghọọ onye ọrụ. Ụlọ ọrụ Nche Nchebe nwere ọtụtụ ndị ahịa nke ụwa na ndị ahịa si United Arab Emirates. Ị nwere ike ịnweta ohere ọrụ n'ime a ụdị ọrụ dịgasị iche iche. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịhọrọ site na mkpọsa azụmaahịa, ego ma ọ bụ ọbụna ọrụ na nchekwa agụmakwụkwọ. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ maka ụlọ ọrụ ọbịa. N'akuku nke a, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere ahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ejikọtara ya na Guard Force Security Service.
Ha na-akwụkwa ụgwọ maka ya Ọrụ CCTV na Dubai
Nke a bụ njikọ ebe ị ga-edeba aha http://guardforce.ae/career/
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ugbu a ezigbo ntuziaka maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi ugbu a, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.